आईजीपी महात्म्य « News of Nepal
के रहेछ यो प्रहरीको आईजीपी भन्ने पद भनेर अहिले धरहरा छेउछाउमा निकै चर्चा हुन थालेको छ। प्रहरीको आईजीपी भनेको निजामतितर्फ गृह सचिवको अन्डरमा रहने एउटा सामान्य कर्मचारी हो। तर, नेपालमा अहिले मानिलिऔं प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिभन्दा पनि माथि पुर्याएर किन व्यवहार गरिएको होला ? कुरा बुझेर बुझिनसक्नु रहेको छ।
कुनै पनि व्यक्ति सो पदमा पुर्याउने प्रक्रिया के छ त्यही गरे त सकिजाने हो। तर, हेर्नुस् त पाठकबृन्द ⁄ सत्तारुढ दलका एक जना सभापति र सोही पार्टीका गृहमन्त्रीको कुस्ती चलिरहेको छ। मूल्यांकन गर्न कति सजिलो छ भने जसको कार्यमूल्यांकन राम्रो छ उसैलाई बनाए भइहाल्यो। जातीयता, क्षेत्रीयता के के हो के के ताकिएको ? मान्छे को सक्षम हो भन्ने हेर्ने कि कुन क्षेत्रमा जन्मेको भनेर हेर्ने।
क्षेत्रभन्दा पहिला कुनै पनि व्यक्ति नेपाली हो। नेपालीलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने बराबर अधिकार हुनुपर्छ। यहाँ त यस्तो हौवा फैलाइएको छ कि फलानो आईजीपी भए फलानो पार्टीले झ्याप्पै निर्वाचन जित्ने अवस्थामा पुर्याइदिन्छु भनेरसमेत प्रतिबद्धता जनाए रे। पहिला त जनताले मत दिनुपरेन र भन्या ? राम्रो काम गरेको भए त्यसै चुनाव जितिहालिन्छ। जनताले मूल्यांकन गर्ने गरी राम्रो काम गरेको छैन भने १२ जना आईजीपी एकैपटक बनाए पनि केही हुनेवाला छैन।कस्तो कुरा नबुझेको होला।
प्रक्रियाअनुसार आईजीपी नियुक्त गरेर खुरुक्क चुनावतिर लाग्नु नि। धरहरा अहिलेका नेता भएको ठाउँमा भइदिएको भए अहिलेसम्म तीनवटा चुनाव गराइसक्थ्यो। तर, त्यो ठाउँमा परिएन। त्यहीं भएर अहिले नौटंकी देख्नु परिरहेको छ। के गर्ने ,होइन पाठकबृन्द !